မကြေးမုံ၏ တွေးမိသမျှ: နတ်မောက်မြို့က သူငယ်ချင်းအိမ်
posted by mirror time 4:11 PM
10 Responses to “နတ်မောက်မြို့က သူငယ်ချင်းအိမ်”
ရောက်ဖူးချင်မယ် မေရာ ရေ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ဇာတိမြို့ကလေးဆိုတာနဲ့နွေးထွေးပြီး လုံခြုံမယ်လို့ စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ် ။
အမ ရေ အဲဒီနေရာကိုသွားရင်လေ....
နောက်ဆုံး ... ကြေကွဲဝမ်းနည်းမိနေတော့မှာပဲဗျာ
အခုလို သတိတရ နဲ့ တင်ပေးတဲ့အမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
အရေးအသားက ကောင်းတော့ လွမ်းလောက်သွားပြီး ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပါတ်သက်တာ ကြံဖန်ပြီး ဂုဏ်ယူပြောရဦးမယ်၊ အယင်ကပေါ့ နတ်မောက်က ဗိုလ်ချုပ်အိမ်တော့ မရောက်ဖူးပါဖူး၊ ရန်ကုန်က ဗိုလ်ချုပ်အိမ်တော့ ကောင်းကောင်းကို မွှေနှောက် ရောက်ဖူးတယ်၊ သူငယ်ချင်းက အဲဒီဝင်းထဲ နေတာလေ၊ ခြံဝင်းကကြီး ပြုပြင်မဲ့သူကမရှိ၊ လူကမနေဆိုတော့ သရဲခြောက်တယ်ဗျ...ဒါပဲမှတ်မိတယ်..အို..နောက် .. အောင်ဆန်းလင်း ကျသေတဲ့ ရေအိုင်လေးက ဒူကဘာတို့ ငါမျှားလိုက်သေးတယ်.. ငါးရံ့လား? ငါးခူလား? မသိဖူး ဝင်းဦးလို နှုတ်ခမ်းမွှေးနဲ့ ငါးတွေ ရတယ်ဗျ။
အမက ကွန်မန့် လုပ်ဖို့ ပို့စ်အောက်မှာ လိုက်ရှာနေတာ။ ခုမှ တွေ့တယ်။
တို့တွေအားလုံးရဲ့ တဦးတည်းသော ဗိုလ်ချုပ် မြို့ကို ရောက်ခဲ့တာ ညီမကို မုဒိတာ ပွားမိပါတယ်။ ဖတ်ရင်း စပယ်နံ့လေး မွှေးလာတယ်။
ဒီပုံလေးနဲ့ တွဲတဲ့စာက ရရင်ရ မရရင်ချ တဲ့။
နောက်တစ်ခါ ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ပြီးရင် မပျက်အောင်
mirror အဲဒီမြို့လေးမှာ.. ဗိုလ်ချုပ်ပြတိုက်အိမ်ကလေးလဲ..ရှိတယ်ဆို။ အခု မတွေ့ခဲ့ဘူးလား။ ဘာပဲပြောပြော.. သမိုင်းထဲက..သွေးတွေက..ဆက်လက်လည်ပတ်နေတာကို ခံစားနေရတယ်။
တွေ့ခဲ့တာပေါ့ အစ်မကေရဲ့ ဘယ်နေပါ့မလဲ...။
ပိတ်ထားတာကိုကိုပဲ မရရအောင် သွားသွားကြည့်ခဲ့တာ။
လာဖတ်သွားတယ် ညီမလေးရေ။ ဗိုလ်ချုပ် ပုံလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ။